Namaly ny tsaho fanenjehana azy ho marary sy lasa nandeha nitsabo tena an-tsokosoko any ivelany ny Filoha, nandritra ny fidinana ifotony nataony teny amin’ny orinasa "Pharmalagasy", omaly. 2 juillet 2020
Fantatra nandritra ity fidinana ifotony ity koa fa hivoaka afaka iray volana ny famokarana voalohany ny "gélules CVO+" ao amin’ny "Pharmalagasy". Fitaovana harifomba sy teknolojia avo lenta avokoa no manao ny asa famokarana eny an-toerana. Efa mandeha amin’izao ny fametrahana ny fitaovana rehetra hamokatra fanafody.
Hamokatra fanafody 15 000 isa-minitra